Semalt waxay bixisaa talaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida loo ciribtiro Google Analytics Spam
Waxaa jira walaac guud oo ku saabsan spam gaari ah oo ka muuqda Google Analytics. Macallinka soo socda, Max Bell, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare Macaamilka Macaamiilka, ayaa ka dhigaya tarjumada taraafigga ee micnaheedu yahay, waxa macnaheedu yahay goobtaada, iyo tallaabooyinka aad qaadi kartid si aad u xalliso dhibaatada.
Spam Referrer ayaa ka muuqda qaybta "Gudbinta" iyo "Pageview" qaybta Google Analytics. Waxay kuxirantahay nooca spam ee lagu hagaajiyay goobtaada. Ma ay metelaan booqashooyinka dhabta ah ee dadka, waana ay fududahay in la soo sheego qaar ka mid ah iyaga oo isticmaala URL shaki leh. Spam ee kuugu muuqda falanqayntaada waxay qaadan doontaa labada nooc:
Spam Spamer Spam - no deposit casinos. Qaabka cabbiriddu waa cillad ku jirta hawlaha Google Analytics, taas oo u oggolaanaysa in ay horumariyayaashu ku qabtaan dhaqdhaqaaqa isticmaalka marka ay goobjoog ka yihiin, ama goobaha cusub ee goobta. Horumarinta ayaa sidaas darteed, u diri kara macluumaadka GA si toos ah iyadoon la booqan goobta. Waxay noqotaa mid aan macquul ahayn in la xakameeyo jiheeyayaasha galka iyadoo la adeegsanayo faylka .htaccess maadaama aysan jidh ahaan u galin goobta. Faylka .htaccess waa hab loo isticmaalo si loo soo saaro domaanyo gaar ah oo loo isticmaalo in lagu soo booqdo goobta. Habka ugu wanaagsan ee looga saari karo xawilaadaha lafdhabarta waa in lagu xareeyo Google Analytics si ay uga tarjumeyso xogta marti-gelinta saxda ah.
Tarjunka gudbinta Spam Waa badi shaqada hawada ee booqda bogga, ka soo horjeeda shuruucda ku jirta faylka robots.txt, oo ku dhammee warbixinta Google Analytics oo qayb ka ah gaadiidka. Goobahaasi waxay booqdaan goobta si gaaban, taas oo natiijadeedu ay keentay ciriiri iyo dooxooyin aan wali lahayn. Wixii spam noocan ah, waxaad isticmaali kartaa faylka .htaccess si aad u xakameyso goobaha gaarka ah ee gaar ah. Haddii kale, isticmaal habka fiilada si aad u diiddo ilo gaar ah oo tixraac ah oo muujinaya in warbixinnada GA ay muujinayaan.
Maxay tahay tilmaanta sidan?
Qodobka heysta qoryaha booqashada goobta dib u noqosho waa inuu ku muujiyo warbixinnada GA. Hadafkooda ugu weyni waa in ay leeyihiin xayndaabkooda ay ku muuqdaan liistada dadka soo diray. Marka xiriiradaasi ay ka muuqdaan warbixinta, waxay keenaan xiisaha milkiilaha, iyagoo doonaya inay arkaan sababta ay u soo qaadaan taraafikada. Isla markiiba waxaad gujisaa bogga, waxaad ku diiwaangashaneysaa booqde ku yaal goobta. Khabiiradu waxay kugula taliyaan milkiilayaasha bogga ah inayan ku dhejin xiriirka aan la garanayn sababta oo ah waxay sidoo kale u noqon karaan dhexdhexaadiyayaal fayraska kombiyuutarka.
Saamaynta xun ee taraafikada taraafikada goobta
Gaadiidka isgaadhsiinta ayaa sidoo kale saameyn doona heerarka qaxarka marka ay soo celiyaan boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol, taasoo ka dhigeysa in ay ka sarreyso tan dhabta ah. Si kastaba ha ahaatee, saameyn kuma yeelan doonto saamigaada guud ee bogga natiijooyinka raadinta maaddaama Google Google aysan ku xisaabtamin mid ka mid ah faahfaahinta Google Analytics maaddaama ay go'aamiyaan qiimeynta.
Ma jiraan wax faa'iido ah oo laga heley goobta laga soo wado taraafikada?
Ma jiro wax faa'iido leh in taraafikada taraafigu keenaan website-ka ama Analytics guud ahaan haddii aadan jeclayn inaad aragto kororka kororka ee muuqaalka bogga
Ka takhalusidda taraafikada
Ku billow adigoo abuuraya "View" cusub "Google Analytics" si loo hubiyo inaadan sifeynin taraafikada dhabta ah. Had iyo jeer hayso aragti asalka ah si aad u dhaqantid ilaha xogta qaaska ah, iyo sidoo kale dib u habeyn haddii ay wax dhacaan. Guji 'View' tab ka soo qaybta Admin ee profile. Muuqaal hoos-u-dhac ah ayaa soo baxaya "abuur-abuur". Ku dar websaydh, aag waqti ku haboon, oo dhamaystir sameynta aragtida cusub. Guji "Home" si aad u dooratid aragtida aad rabto inaad codsato shaandhada
Tallaabada xigta waa in la ogaado nooca marti-geliyaha ay sax yihiin iyo kuwa aan ahayn. Waxaad samayn kartaa tan adoo dooranaya liiska aad ka heli kartid aragtida asalka ah. Raac jadwalka (Dhageysi> Tiknoolaji> Network> Hostname).
Waa waqtigii la abuuri lahaa shey cusub oo loogu talagalay gudbinta Ghost. Xulo aragtida cusub ee la abuuray oo dooro "Filters," halkaas oo ah isla markiiba in lagu daro mid cusub. Sii shaandhada cusub ee magaca, hubina in ay tahay "Custom". Calaamadee sanduuqa si aad uga mid noqotid "doorasho" oo ka dooro "Hostname" oo ka soo dego liiska "Filter Filter". Ku rid dhamaan magacaaga martida ah ee qaabka filterka ee ay kala soocaan | | iyada oo aan lahayn meel. * Ka hor domain kasta waa inuu ka caawiyaa qabashada subdomains ee ku dhex jira. Guji guji iyo ka bax.
Wixii gudbin ah, u samee shaandhada caadada oo dooro "Kala saar". Xulo "Ololaha Iskaashiga" ee "Filter Field". "Tusmada Foomka" waa inay ku jirtaa liiska magacyada spam ee la aqoonsaday.
Ugu dambeyntii, waxaa jira baahi loo qabo in laga saaro baabuurta ka soo gasha qadka wanaagsan sida google Google tan iyo waxqabadyada goobta ku jirta ayaa laga yaabaa inay sidoo kale ka muuqato gaadiidka Analytics. Marka la eego aragtida cusub, xulo goobaha ay ku jiraan fursada hoose ee si ay u xaddidan dhammaan kabaha iyo caarada. Calaamadee sanduuqa, oo aad qarka u saaran tahay